अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा मनाइयो नेपालमै पहिलो पटक ‘ध्वाँसे चितुवा दिवस’ ! | Alagdhar
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता वितरण झन् पेचिलो बन्दै
टोकियो ओलम्पिकको जुडो खेलमा सोनिया भट्ट पराजित, डोल्गोभा इरिनाको जित
राजकुमार सिद्धार्थको सम्झनामा कपिलबस्तुको तिलौराकोटमा महाभिनिष्क्रमण दिवस मनाइयो
रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा सकियो कबर्डहल पुनर्निर्माणको काम
गृह प्रवक्तामा पोखरेल
घरBanner Newsअन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा मनाइयो नेपालमै पहिलो पटक 'ध्वाँसे चितुवा दिवस' !
राजु आचार्य/पोखरा : नेपालमा पहिलो पटक कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा ध्वाँसे चितुवा दिवस मनाइयो । विद्यार्थी, शिक्षक र संरक्षणकर्मीले एकदिनभर सो उत्सव मनाएका थिए । हिमालय मिलन मावि ताङतिङ तथा प्रकृतिका साथीहरूले चैत्र पहिलो साता सो कार्यक्रम संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । यस अवसरमा ‘नेपालका बिरालाहरू’ तथा ‘नेपालमा ध्वाँसे चितुवाको अवस्था’ सम्बन्धमा दुईवटा जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अन्तर विद्यालयस्तरिय चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा ध्वाँसे चितुवा सम्बन्धी वृत्तचित्र समेत प्रदर्शन गरिएको थियो।
विधार्थीहरुलाई ध्वाँसे चितुवाको सम्भावित वासस्थानमा लगेर जानकारी समेत गराइएको थियो । सो अवधिमा चितुवा कस्तो ठाउँमा बस्छ, के खान्छ, किन संरक्षण गर्ने भनेर जानकारी गराइएको थियो ।विद्यार्थीहरुले खुब चाख दिएर यस कार्यक्रममा भाग लिएका थिए ।
कक्षा ८ कि बिधार्थी रोबिना गुरुङले भनिन ‘मैले बाघ, चितुवा, हिउँ चितुवा र वन ढाडेको बारेमा मात्र सुनेकी थिए । ध्वाँसे चितुवा पनि हुँदो रहेछ, त्यो पनि हाम्रो गाउँ नजिकै ।यसको संरक्षणको लागि म एकदमै प्रयास गर्छु’ ।विद्यालयका शिक्षक दिलीप गुरुङले प्रतिक्रिया जनाए ‘बाँदर जसरी रुखमा चढ्ने यो जीवको सुन्दरता बयान गरी साध्य रहेनछ । कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा मात्रै अभिलेख गरिएको यो स्तनधारी संरक्षणको लागि पहल गर्न हामी सधैँ तयार छौँ ‘।
लामो समय देखि ध्वाँसे चितुवाको अनुसन्धान र संरक्षणमा लागेका यादव घिमिरेले सो कार्यक्रमको समन्वय गरेका थिए । घिमिरेले भने ‘विगतमा गरिएको क्यामेरा ट्रयापको क्रममा यो क्षेत्रमा प्रजाति परेको थियो । दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो उत्सव आयोजना गरेका हौँ ‘। उनले थपे ‘उत्सव पछि यिनका चुनौतीहरूमा कमी आउने विश्वास गरेका छौँ’ ।
यो कस्तो प्रजाति हो ?
नेपालमा पाइने १२ प्रजातिका बिरालो प्रजातिहरूमध्ये ध्वाँसे चितुवा लजालु स्वभावको हुन्छ । नेपालका ११ जिल्लाका ३० भन्दा बढी स्थानहरूमा यिनको अभिलेख गरिएको छ । यिनको वास्तविक अवस्थाबारे अझै पनि थोरै मात्रै ज्ञान रहेको छ । नेपालमा सबै भन्दा पहिला सन् १८५३ मा काठमाडौँमा छालाको अभिलेख गरिएको छ । यिनले १ देखि ५ वटा सम्म बच्चा पाउने गर्दछन् । यसको पुच्छर र शरीरको लम्बाई बराबर हुन्छ । यिनीहरूको तौल २२ केजी सम्म अभिलेख गरिएको छ ।
नेपालमा तराई देखि ३६०० मिटरको उचाइसम्म यसको अभिलेख गरिएको छ । यो प्रजातिले भुइँमा भन्दा रुखमा धेरै समय बिताउने गर्दछ । रुखका टोढ़काहरूमा बस्ने भएकोले चितवनका उत्तरी भागमा यसलाई टोढके बाघ समेत भनिन्छ । यो रुखमा बाँदर झैँ चढ्ने उफ्रने तथा झुन्डिने गर्न सक्छ । बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रणमा सहयोगी यो स्तनधारी बन विनाश, डढेलो, चोरी सिकारी, अवैध व्यापार आदि कारणले अफ्ठयारोमा पर्दै गएका छन् । यिनीहरूले बाँदर सहित मृग, लोखर्के, कालिज, बँदेल लगायत खाने गर्दछन् ।नेपालमा यो प्रजातिलाई संकटापन्न सूचीमा राखिएको छ । नेपाल सरकारले यो प्रजातिलाई संरक्षित प्रजातिमा पनि सूचीकृत गरेको छ ।
अघिल्लो लेखमानेपाललाई व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
अर्को लेखमाबारा-पर्साका हुरी प्रभावितलाई प्रदेश तीनले १ करोड रूपैयाँ दिने